Talyaaniga oo ka qeyb qaadanaya horumarinta iyo dhismaha Ciidanka Booliska Soomaaliyeed – STAR FM SOMALIA
Talyaaniga oo ka qeyb qaadanaya horumarinta iyo dhismaha Ciidanka Booliska Soomaaliyeed
Dowladda Talyaaniga ayaa qalab ciidan ku wareejisay Taliska Ciidanka Booliska Soomaaliyeed, iyadoo qalabkan uu ka qeyb qaadanayo horumarinta, tayeynta iyo dhismaha Ciidanka Booliska.
Taliyaha Ciidanka Booliska Soomaaliyeed Jen, Maxamed Sheekh Xasan Xaamud ayaa sheegay in muddooyinkii u dambeeyay uu Booliska Soomaaliyeed ku tallaabsanayay horumaro kala duwan, isla markaana ay dib u soo celiyeen xiriirkii Caalamka.
Jen. Xaamud ayaa dowladda Talyaaniga uga mahad celiyay doorkooda ku aadan horumarinta Ciidanka Booliska Soomaaliyeed, isagoo xusay in qalabkan ciidanka loogu tala galay uu ka mid yahay qalab uu horay Talyaaniga ugu deeqay Booliska Soomaaliyeed.
Waxaa uu sheegay in qalabkan ay ku howl galayaan Ciidamo horay Talyaaniga ugu soo tababaray dalka Jabuuti, waxaana uu intaa ku daray inay xoogga saarayaan sidii loo horumarin lahaa ciidanka booliska Soomaaliyeed.
Safiirka Talyaaniga u qaabilsan Soomaaliya ayaa shalay ku wareejiyay Taliska Booliska Soomaaliyeed qalab ciidan oo loogu tala galay inay ku howl galaan, si ay u xaqiijiyaan howlaha amni ee ay ka wadaan gudaha Soomaaliya.